ဇွန် 2015 |9၏စာမျက်နှာ 18 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဇွန်လ (စာမျက်နှာ 9)
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ် CSO ATSC 3.0 အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသံလွှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖို့တိုက်တွန်း
ဇွန်လ 16, 2015 - - ဒေါက်တာရစ်ချတ် Chernock, Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်မှာ CSO, ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ကိုရီးယား Princeton, NJ အတွက် Conferences ကမှာ Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအသံလွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနျ Standard အကြောင်းပြောမည် Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ယနေ့က၎င်း၏ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သိပ္ပံအရာရှိနှင့် ATSC ရဲ့နည်းပညာကုလားထိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ Group မှဒေါက်တာရစ်ချတ် Chernock, Broadband မာလ်တီမီဒီယာအပေါ် BMSB 2015 သည်ကို IEEE International ကစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာပြောမည် ...
VITEC အိတ်ဆောင် HD ကို / SD က HEVC ဒီကုဒ်ဒါကိရိယာနှင့်အတူ HEVC လွှ Market ကအတွက်ခေါင်းဆောင်မှု Continues
MGW D265 ကွင်းဆင်းအသုံးပြုမှုနှင့်ခရီးသွားပစ္စည်းများ SUNNYVALE, ကာလီဖိုးနီးယားများအတွက် HEVC ၏ရီးရဲလ်အချိန်ဒီကုဒ်ဒါ (H.265) IP ကို ​​Streams, HD ကို / SD က-SDI နှင့် HDMI output နှင့်အသေးစား Form ကို Factor စံပြ Features - ။ ဇွန်လ 16, 2015 - VITEC တစ်ဦး အဆင့်မြင့်သည်ဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းနှင့် streaming များဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့ယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်ပို့နေသည်၎င်း၏တော်လှန်ရေးသမား, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်-တန်း MGW D265 ခရီးဆောင် HEVC (H.265) IP ကိုဒီကုဒ်ဒါကြောင့်ကြေညာခဲ့သည်။ ...
InfoComm 2015 မှာ Aja စျေးသစ် Mini ကို-converter
HB-T-HDMI နဲ့ HB-R-HDMI Mini ကို-converter transmit နှင့် Ethernet ကျော် HDMI လက်ခံ, ရွယ်-DP SDI မှတိုင်းဒေသကြီး-of အကျိုးစီးပွား DisplayPort ပေးနှင့် Fido-4T နှင့် Fido-4R မှ 4G-SDI ၏3လိုင်းများပေး ဖိုင်ဘာကူးပြောင်းခြင်း Orlando တွင်, FL, InfoComm Booth #1671 (ဇွန်လ 16, 2015) - Aja ဗီဒီယိုစနစ်များယနေ့ရွယ်အတူ InfoComm 2015 သည် HB-T-HDMI, နှင့် HB-R-HDMI မှာအသစ်ငါးခု Mini ကို-converter မိတ်ဆက် -DP, Fido-4T နှင့် ...
မှတ်တမ်းတင် re-ရောနှောစတိဗ် Pederson နဲ့ Daniel ဂျေ Leahy Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများကို Join
CULVER CITY, CALIF.- တည်မြဲသည့်၎င်း၏သံကိုဌာနကြီးထွားဖို့, Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများက၎င်း၏ဖန်တီးမှုန်ထမ်းမှဆုရ Re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှောစတိဗ် Pederson နဲ့ Daniel ဂျေ Leahy ကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ Pederson နှင့် Leahy တသီးပုဂ္ဂလအဖြစ်, သူတို့က Sony Pictures '' cari အပေါ်ရောစပ်ထားတဲ့, အ Antoine Fuqua ရုပ်ရှင်အဆိုပါ Equal, အပါအဝင်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံစီမံကိန်းများကို၏နံပါတ်ပေါ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ ...
Adorama Pro ကိုနယူးကို Canon XC10 4K တီဗွီကင်မရာ Raffles Giveaway ကြေညာ
အနိုင်ရမှအခွင့်အလမ်းများအတွက်ဇူလိုင်လ 10th ဖြင့် ဝင်. - Adorama Pro ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဝါသနာရှင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံဆရာနှစ်ဦးစလုံးအသစ်ကို Canon XC4 10K တီဗွီကင်မရာ Raffles Giveaway ပြီးပြည့်စုံသောကြေညာခဲ့ပါတယ်, ကို Canon XC4 4K တီဗွီကင်မရာ 12K နှင့်အပြည့်အဝ HD ဗီဒီယိုပစ်ခတ်မှုပေါင်း 5-Megapixel ဒစ်ဂျစ်တယ်နေဆဲဓာတ်ပုံ features! နယူးယောက်, နယူးယော့ - ဇွန်လ 16, 2015 - Adorama Pro ကိုကမ္ဘာ့တစ်ဦး ...
BeckTV တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုစှမျး Campuswide တိုးမြှင်, Mizzou ပြေးခုံပစ်ဘို့ဗီဒီယိုထိန်းချုပ်ရေးအခန်းဆောက်
Austin, Texas ပြည်နယ် - ဇွန်လ 16, 2015 - ယနေ့ကကိုလံဘီယာ, Missouri မှာရှိတဲ့ Missouri တက္ကသိုလ်မှာ Mizzou ပြေးခုံပစ်ဘို့နှစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်-ဗွီဒီယိုအသစ်ထိန်းချုပ်မှုခန်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ကြေညာခဲ့သည် BeckTV, United States ကို '' ဝန်ကြီးချုပ်ဒီဇိုင်း-တည်ဆောက်စနစ်များပေါင်းစည်းတ ။ ထိန်းချုပ်မှုအခန်းပေါင်း scoreboard ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဝဠာပေါ်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ကောလိပ်အားကစားဖြစ်ရပ်များ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ campuswide ထုတ်လုပ်မှုကိုထောကျပံ့ ...
သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' နယူး Vibe 4K HEVC ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ4ပြင်သစ်ပွင့်လင်း၏အောင်မြင်သောတိုက်ရိုက် 2015K လွှ Enabled
RENNES, ပြင်သစ် - ဇွန်လ 15, 2015 - သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ယနေ့တနင်္ဂနွေဖွင့်ပတ်ရစ်သော4ပြင်သစ်ပွင့်လင်းတင်းနစ်ချန်ပီယံ၏ကုမ္ပဏီရဲ့အသစ် Vibe (R) 4K High-ထိရောက်မှုကိုဗီဒီယို coding (HEVC) အန်ကုဒ်အောင်မြင်စွာ enabled တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ 2015K streaming များ, ကြေငြာခဲ့သည် ဇွန်လ7။ အဆိုပါ 2015 NAB Show မှာဖြန့်ချိခြင်း, All-သစ်ကို Vibe 4K HEVC Real-time encoding ကဖြေရှင်းချက်မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမူတည်ပြီးခွင့်ပြု ...
ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကို Global အကြောင်းအရာစျေးကွက်များအတွက်က Wall Street ဆက်သွယ်ရေးကိုရွေးကောက်ပြီး
URBANA, မကျန်းမမာ - ။ ဇွန်လ 15, 2015 - ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်ယင်း၏ထုတ်လွှင့်-related signal ကို-အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် terminal ကိုပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအကြောင်းအရာစျေးကွက်ကိုင်တွယ်ရန်စံချိန်၎င်း၏အေဂျင်စီအဖြစ်က Wall Street ဆက်သွယ်ရေးဝင်ရောက်ခဲ့သည်သိရသည်။ ဒါ့အပြင်အစိုးရအတွက်အဖွဲ့အစည်းများ, ပညာရေး, အကြားအသိအမြင်ပြုစုပျိုးထောင်စဉ်က Wall Street ဆက်သွယ်ရေး, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အားကစား၎င်း၏အဓိကစျေးကွက်များတွင်၎င်း၏ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ...